Akụkọ - Otu esi eme ka a na-eche echiche dị mma?
Olee otú iji nwee ezi uche n'ekwú ọkụ ahụ emebe?
Ma nhazi nke kiln ahụ ọ dị mma ma zuo oke, ọ na-egbochi ndị na-etinye ego na-egbochi ma na-egbochi ogo nke kiln ahụ. Site n ’ntụnyere dị n’etiti usoro mmepụta dị iche iche, anyị chọpụtara na otu ụdị akụrụngwa na otu ụdị kilns nwere ike ịnwe nsonaazụ dị iche iche n’ihi ihe ndị e mepụtara.
Isi ihe dị na isi ihe ndị a:
Nke mbụ, chọpụta mmekọrịta nke 'akụkụ anọ' (ihicha, ikpo ọkụ, ọkụ na jụrụ). Enweghi ike ikpebi mmekorita nke "Akụkụ anọ" dịka ihe ịtụnanya si dị. Ọ dị mkpa ịghọta ọdịiche nke akụrụngwa, gbanwee usoro na ọnọdụ mpaghara, gbanwee maka njirimara nke akụrụngwa, mepụta ma chepụta ogologo na oke nke ngalaba ọkụ. Sizedị nhazi nke kilns ekwesịghị ịbụ oke mgbanwe. N'akụkụ nke arụmọrụ na-arụ ọrụ na nhazi, a ga-ahazi ya nke ọma ma chịkwaa ya ma ọ bụrụ na teknụzụ dị mgbagwoju anya. Brik a na-agbapụ dị iche na ngwaahịa ndị ọzọ a na-agbapụ. Ogwe oku, nkwụsi ike nke ngwaahịa, ikpochapu na ikpo ọkụ dị ntakịrị karịa ngwaahịa ụlọ ọrụ ndị ọzọ na ọ ga-adị mma iji gboo mkpa nke onwe ya. Na akụkụ nke imewe na nhọrọ ihe, anyị kwesịrị ị paya ntị na itinye ya n'ọrụ. Ndụ nke ite ọkụ na-adabere n'ụzọ dị ukwuu n'ihe eji eme ihe, ebe ihe ọkụ na-emetụta ego. Otu esi emeso mmekọrịta abụọ a bụ ihe kacha sie ike maka ndị na-etinye ego na ya. N'otu aka, ọ dị mkpa ịdị mma dị mma, na n'otu aka nke ọzọ, obere itinye ego ka mma. N'ihi ya, ọ na-esiri gị ike ịme atụmatụ nhọrọ ihe ezi uche dị na ya. Dịka ọmụmaatụ, otu ụlọ ọrụ mmepụta ihe na Northeast China na-ahọrọ ngwaahịa maka ngwaahịa akara ájá n'oge a na-emepụta ya, ebe ụlọ ọrụ ọzọ na South China na-ahọrọ ngwaahịa nchara maka ịkọ akara ájá n'oge a na-emepụta ya. N’uche, ndị mmadụ ga-eche na itinye ego n’ahịa ha pere mpe pere mpe karịa nchara, mana etu esi etinye ya n’ọrụ, ihe anaghị adị iche. Ihe nkedo nke aja na-adị mfe imebi n'oge ọrụ nke oku, nke na-eduga na ikpo ọkụ na-akwụsị ịrụ ọrụ na ọnụahịa nke nkwụsị na mmezi na-abawanye, mana enweghi ike imebi ngwongwo nchara. Yabụ, n'oge a haziri nke a, ekwesịrị ịtụle ma ego itinye ego yana nrụpụta nrụpụta ma anyị agaghị atụle ịchekwa ego naanị itinye ego. Banyere nhazi nhọrọ, enwekwara usoro iji chekwaa ego. Dịka ọmụmaatụ, maka nhazi obodo n'okpuru brik nyocha nke ọkụ ọkụ ọkụ sintered, nhọrọ nke ihe ekwesịghị ịbụ otu, gụnyere nhọrọ nke ihe dị na mpaghara okpomọkụ dị iche iche kwesịrị ịgwọ dị iche: ndị nwere ike imeghari na ụdị ọkọlọtọ kwesịrị ahọrọla ụdị pụrụ iche; ndị ahụ nwere ike imeghari n'ụdị nkịtị, enweghị ike ịhọrọ ọkwa dị elu; ndị nwere ike imeghari ka nkịtị ụrọ brik, enweghị ike ịhọrọ elu alumina refractory brik; ndị nwere ike ịzụta ebe dị nso ekwesịghị ịzụta nke tere aka.
N'oge gara aga, anyị chọpụtara na nhazi na nhọrọ nke ọtụtụ kilns adịghị edozi dị ka mpaghara dị iche iche, nke na-abawanye itinye ego ahụ. N'okwu a, iji chekwaa ego, a ga-agba mbọ belata mbibi na-enweghị isi ego. Maka ndị na-etinye ego, na nhọrọ ndị ọzọ na-emepụta ihe owuwu, dị ka ụlọ ọkụ, mgbidi ọkụ, nchekwa ọkụ, mkpuchi ọkụ, nguzo ọkụ, usoro nchara na ihe ndị ọzọ, mmegharị na ntinye kwesịrị ịbụ isi nke iji ezi uche eme ihe.